Akụkọ - Ihe dị iche n’etiti Halogen, Hid na Isi Isi ọkụ
Ihe dị iche n’etiti Halogen, Ihe mkpuchi na isi ọkụ
E nwere ụzọ ọkụ isi dị atọ dị iche iche. Typesdị ụgbọ ala ndị a bụ Halogen, Xenon & LED. Onye ọ bụla na-arụ ọrụ dị iche iche n'ụzọ ha si emepụta ọkụ wee mepụta ụdị ọkụ dị iche iche n'okporo ụzọ.
Halogen ọkụ bụ n'ezie ọkụ ọkụ a na-ejikarị n'ọtụtụ ụgbọ ala. Ihe mepụtara ha bidoro n’afọ ndị 1960 nke bụ ihe ngwọta n’enweta ọkụ site n’enweghi ego. Dị ka ọkụ ọkụ, halogens jiri tungsten filament kpụ ọkụ n'ọnụ wee mepụta ìhè. Otú ọ dị, a na-agbanye filament ahụ na afụ nke gas halogen n'adịghị ka ihe ọkụkụ ahụ, dị ka ụzọ iji melite ogologo ndụ na arụmọrụ. Ọkụ ndị a dị mfe ịmepụta iji mee ka usoro nrụpụta adịghị ọnụ. Ọzọkwa nnọchi-akwụ ụgwọ dịkwa oke ala. Halogen ọkụ nwere ike dabara ọtụtụ ụgbọ ala nke ụdị dị iche iche ka ha na-abịa nha na ụdị dị iche iche. Ọkụ ndị a anaghị enye ọhụụ kachasị mma dị ka bọlbụ HID ọcha na LEDs. Nnukwu ọkụ dị ọkụ na-efu mgbe ị na-eji nnukwu ọkụ ndị a wee si na ike na-efu. Ọzọkwa, ha na-emebi emebi chọrọ nlekọta ọzọ n'adịghị ka ndị LED na HID
Zoro (Akwa siri ike orùrù)
A maara ha nke ọma maka ọkụ ọkụ na-enwu gbaa nke na-eru. A na-etinye tungsten ha na quartz tube jupụtara na gas xenon. Ha nwere ike ịchọ ike karịa mgbe agbanwuru ha mana were ya pere mpe iji wee na-enwupụta enwu. Ọzọkwa, ha nwere ogologo ndụ ma e jiri ha tụnyere halogens. Ha nwere ike iyi ihe ka mma mana ha na-egosipụtakwa ụfọdụ mmachi dịka ị dị oke ọnụ karịa na nrụpụta na ngbanwe. Ha anaghị adị mfe ịmepụta site na usoro dị mgbagwoju anya ha. Ìhè ha na-enwu gbaa na-akpata mmetụta kpuru ìsì nye okporo ụzọ na-abịanụ nke na-adịghị mma ma nwee ike ibute ihe egwu n'okporo ụzọ.
Ikanam (Light Emitting Diode)
Ndị a bụ ihe ọhụrụ dị ugbu a na nso nso a nke na-anabata n'aka HID na Halogens. Ndị LED ahụ na-eji teknụzụ diodes eme ihe ebe ha na-eweta ọkụ mgbe ọkụ eletrik na-akpali ndị elektrọn ha. Ha na-achọ obere ike na ume ma ka na-ewepụta ọkụ na-enwu enwu karịa ọkụ ihu halogen nke na-edubukwa ndị LEDs ogologo ndụ. Enwere ike iji diodes ha mee ihe n'ụdị dị iche iche na-enye nhazi pụrụ iche. Na teknụzụ ikanam, ọhụụ na-emeziwanye ma na-elekwasị anya karị. Agbanyeghị na ụgwọ mbụ nke HID na bọlbụ halogen erughị LEDs, ụgwọ ọrụ na mmezi nke ikanam dị ala karịa. Ikanam ndụ, inwe ogologo ndụ, belata mmezi na oriọna dochie ọnụ. Ebe ọ bụ na a na-edochi ndị LED obere oge, onye nwe ya na-etinye obere ego na oriọna ọhụrụ yana ọrụ dị mkpa iji gbanwee ha. Ọkụ na-erikwa obere ume; ya mere ọnụego nke usoro LED nwere ike ịdị ala karịa nke usoro ọkụ ọkụ.
Control Ogwe aka Bushing, Auto ngwa, Mmechi mmewere, Akụkụ mapụtara, Akara Nkebi, Silicone Rubber Akara,